Tinye Obi Gị na Mmekọrịta Gị | Martech Zone
Azụmaahịa metụtara mmekọrịta. Mmekọrịta gị na ndị ahịa gị, atụmanya gị, ndị na - ere gị na ụlọ ọrụ gị. Mmekọrịta siri ike. Mmekọrịta dị egwu. Idebe obi gị ebe ahụ nwere ike imebi ya. Ikwesiri itinye obi gị na mmekọrịta gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ha nwee ihe ịga nke ọma, agbanyeghị.
Enwere ọtụtụ ihe kpatara mmekọrịta anaghị emebi. Mgbe ụfọdụ enweghi ike dabara. Ọtụtụ oge mmekọrịta dara n'ihi na ha na-emeso dị ka disposable… ebe ọ bụla ọzọ anaghị kpọrọ mmekọrịta ahụ dokwara. Fọdụ na-eche na mmekọrịta dị 50/50. Na ọ bụrụ na i mee akụkụ gị, m ga-eme nke m. Mmekọrịta ebe ndị ọzọ na-eme ọkara nke ihe ha nwere ike ime abụghị mmekọrịta. Nke ahụ etinyeghị obi gị na ya.
Mmekọrịta dara mgbe anyị anaghị etinye 100%. Iwulite mmekorita nke oma choro ka gi na ndi ozo. Tinye na 100% n'ihi na ị hụrụ ihe ị na-eme n'anya, ị hụkwara ijere ndị ọzọ n'anya. Ihe ọ bụla dị obere ga-eduga na ọdịda.
Afọ a bụ afọ ịkwesịrị ịtụle mmekọrịta gị na itinye obi gị na ha. Ọ bụ afọ inye 100% inye ndụmọdụ site na blọgụ gị. Ọ bụ afọ iji nye ndị ahịa gị 100% n'agbanyeghị ego ole ha na-akwụ, mgbe ha na-akwụ ụgwọ, ma ọ bụ ma ha nwere ekele maka ihe ị na-eme. Itinye obi gị na ya ga-egbo mkpa gị - ọ bụghị naanị nke ha.
Treatkpụrụ Ọma ahụ kwuru ka a na-emeso ndị ọzọ ihe dị ka ị chọrọ ka a gwọọ gị. Otu onye gwara m na e nwere Platinum Rule… ma nke ahụ bụ ka anyị mesoo ndị ọzọ ha chọrọ ka a gwọọ gị. Ọ bụ oge na-emeso atụmanya, ndị ahịa na ndị mgbere dị ka ha chọrọ ka a gwọọ gị. Tinye obi gi na ya.
Nnwale dị mkpa iji hụ ihe na-arụ ọrụ, ihe atụmanya gị na ndị ahịa gị chọrọ, yana itinye ihe onwunwe gị n'ọrụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ka ga-etinye obi gị na ya, agbanyeghị, iji mee ka ọ rụọ ọrụ. Still ka ga-etinye 100% na mmekọrịta ndị ahụ ma ọ bụrụ na ị nwere olileanya na ha ga-aga nke ọma.
Afọ a bụ afọ itinye obi gị.
Jenụwarị 6, 2013 na 11:28 PM
Hụnanya bụ isi ihe na-eme ka mmekọrịta na-aga nke ọma. Na azụmahịa ọ dị mkpa itinye obi gị na ihe ị na-eme. Mee ka gị na ndị ahịa gị, ndị ọrụ ibe gị na ụlọ ọrụ gị nwee ezigbo mmekọrịta.
Daalụ Sir Douglas.
Daalụ Douglas. Ezigbo echiche ga - eme ka ụbụrụ m (na obi) gaa n'ụtụtụ a. Ọ bụ egwuregwu mmekọrịta mgbe niile na azụmaahịa na ndụ. Ekwenyere m kpamkpam. Ihe oma m diri gi na afo ohuru!